Akụkọ kachasị ọhụrụ na nche kachasị mma, kachasị mma, ọhụụ! • Oge Efere 2019 | Gị ndu nche kwa ụbọchị!
gaa na Ọdịnaya Mbụ
Atụmatụ Ntuziaka & Tipszụ ihe
Nhọrọ Nchọta Open
Gị ndu nche kwa ụbọchị!
Ozi kacha elele kacha dị mma, nke kachasị mma na nke ọhụụ.
Ro webata Hublot nke Big Bang Meca-10
Site na Hublot, otutu ndi mmadu mara amara amara nke Big Bang. N'ime mmụọ nchịkọta Big Bang, Hublot na-abịa ugbu a na mbipụta ọhụụ, ya na ndozi dị iche iche iji mee ka MECA-10 caliber nwere akara ụbọchị iri kwesịrị ekwesị. Ọnụahịa sitere na € 10
Ndị a bụ elekere atọ kachasị ọnụ ahịa nke e rere eBay na 3
N'ime ndepụta 20 kachasị nke ihe ndị dị ọnụ ahịa eBay rere ere na 2019 bụ elekere atọ pụrụ iche. Ndi nlere Rolex, Richard Mille na Patek Philippe na-eme nke oma, ha na ebe a na-ere ahihia ama ama.
Swatch na-ewebata nche ọhụrụ Big Bold Jellyfish
Oge elektrik Swatch dị ọnụ ala, nke doro anya sitere na 80s laghachiri ma buru ibu karịa mgbe ọ bụla. Ikpe ahụ nwere dayameta nke 47mm, ya na okpueze ahụ n'ọnọdụ elekere 2. A na-enweta ya na ụlọ ahịa Swatch niile, ọnụ ahịa euro 95.
Igwe eji ọla edo edo edo edo ọhụrụ nke sitere n’aka Cristiano Ronaldo bụ Rolex kachasị dị ọnụ ahịa rụpụtara
Ememe & Ememe
Maka ọpụpụ na nso nso a, akụkọ egwuregwu bọọlụ bụ Cristiano Ronaldo kwụsịrị iyi oge onye nche Switzerland a na-asọpụrụ. Nke a yiri ihe nlere nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ € 500.000.
Ladmụ nwanyị kachasị ewu ewu na-elele na 2019
Nhọrọ dị egwu, nke na-ele ọmarịcha ụmụ nwanyị anya. Site na ụtọ Richard Mille ruo mgbe ọhụụ nke Stlex ladies na-ekiri.
Mkpebi nke a Montblanc nke a Mkpegharị site na € 18.200 nwere oge vintementi na ọkpụkpọ-acha uhie uhie
Akụkọ ihe mere eme & ndabere, Nieuws
Montblanc ele nwere akụkọ pụrụ iche. Ejiri ihe nchekwa minerva hụkwara nke ọma. Oke na 38 iberibe. Ọnụahịa € 18.200.
Anọ elekere anọ nke na - agbakwunye agba ekeresimesi nke ọma
Ready jikerela maka ekeresimesi ma afọ ọhụụ 2020 n'ihu? Nhọrọ a nke elekere anọ ị ga-anọ ikuku. Obi ụtọ na ezumike!
Naanị kpaghasị ihe: ihe ọhụrụ Breitling Aviator 8 B01 Chronograph 43 Mosquito
Ọhụrụ Aviator 8 B01 Chronograph 43 Mosquito. Oge nche anwụ a na-eji egwu egwu wee na-adọrọ mmasị ya na nkọwa ya ndị mara mma, karịchaa ọsịsọ. Nnukwu ọmarịcha oge agụkọ maka ndị ọkwọ ụgbọ elu. Ọnụ ahịa dị ihe dị ka € 7.500.
Mmekota nke Hamilton: Khaki Pilot Schott NYC Limited Edition pilot pilot nwere ndi agha na udiri agha
Nmekorita nke oma n’etiti ndi ahia ama ama ama Hamilton na Schott NYC. Tọrọ ntọala n'otu afọ ahụ, ma ndị na-ebunye ha abụọ maka Air Force, n'etiti ndị ọzọ. Ọmarịcha pilot na mbipụta ole na ole. A na-enweta ya site na +/- € 1.145 euro.
Panerai gbakwụnyere mmetuta ọla edo na Goldtech ™ na ezinụlọ Luminor
'Smụ nwoke, Nieuws
Panerai na-agbakwunye mbipụta ọhụụ mara mma na ọla edo na oke ya. Panerai Luminor Goldtech ™ na 42 mm. Site na ọkpụrụkpụ okirikiri 4.2 mm, otu n'ime ihe kachasị mkpa oge eji agba elekere. A na-enweta ya na nchikota agba agba 2, maka ọnụahịa euro 19.900 euro.
bảng vinh danh op Ihe nlere Richard Mille na Pharell Williams bu ihe nlere anya nke nrọ ya
Site na nlele Cool, anyị na-ejikwa akụkọ ekiri kacha mma, nzụlite, nche oge kachasị mma, oge a ma ama, ihe nlere na ihe ọhụrụ na ụwa!
- ruo 1000 EURO 10.000 - 20.000 EURO 20.000 - 50.000 EURO 100.000 EURO ma ọ bụ karịa 1000 - 2500 EURO 2500 - 5000 EURO 5000 - 10.000 EURO Ndị America Audemars Piguet Akpaaka Ekwenye Ekwenye Breitling Casio celebrity Chronograph Ngosi nke ubochi Iesmụ nwanyị na-ekiri Ndị na-eche nche Ekemu Nleba Akwukwo Nso akụkọ ihe mere eme 'Smụ nwoke Hublot .Tali IWC Schaffhausen Ndị Japan Guidezụta ndu Akpụkpọ akpụkpọ anụ Oge Motorsport Omega Isi okwu Panerai Patek Philippe Ndị na-anya ụgbọ elu Reserve ike Quartz Richard Mille Rolex Eriri eriri roba Seiko ọkpụkpụ smartwatch Egwuregwu egwuregwu Nlekere nke igwe Tag Heuer Oge Switzerland
Banyere Cool Wat.eu
Gaa Leta nlele Cool kwa ụbọchị maka akụkọ kacha ọhụrụ, ndụmọdụ na akwụkwọ ahụaja!
Ndị ama ama ama ama ama
Ọhụrụ Casio nche: ntinye nke G-Shock "Full Titanium" Camouflage
Ihe kpatara Rolex Sky-Dweller 326933 bụ ntinye ego kacha mma n'oge a
Ihe ncheta Hublot Big Bang Scraeria Ferrari 90th